IMIBALA YEKHABINETHI ENGAPHELIYO - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Imibala yeKhabinethi engapheliyo
Imibala yeKhabinethi engapheliyo
Nantsi imibala yethu yekhabinethi esiyithandayo engapheliyo kubandakanya iikhabhathi ezithandwa kakhulu ngexesha kwaye yintoni enceda ikhitshi lihlale kwisitayile. Umbala wekhabhinethi yekhitshi engapheliyo yinto engayi kuphuma ngokukhawuleza okanye ephuma kwisitayela ngokukhawuleza. Oku kuhlala kuthetha ukuba kunokuba uhambe nomkhwa wombala wekhabhinethi entsha, umntu ukhetha izikimu zemibala engathathi hlangothi ezinokufikelela kwimibala yakutshanje ukugcina amaxesha.
Zeziphi iikhabhathi zombala wekhitshi ezingaphelelwa lixesha
Mint (Luhlaza Okhanyayo)
Iibhokisi zeGlasi zoMnyango
Yintoni eyenza ikhitshi lingapheli?
Kukho imibala emininzi enokuphelelwa lixesha ekhitshini. Le mibala kwiikhabhathi inika ubuhle obungenamkhawulo kwizizukulwana. Ngelixa imikhwa isiza kwaye idlula, le mibala ilungelelaniswa ngokulula kwaye iyasebenza ngeendlela ezintsha.
Abayili bengubo yomtshato baseMelika
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini bubuhle bokuqala obungapheliyo, obunika amandla kunye nococeko emakhitshini kule minyaka idlulileyo. Ngelixa umhlophe unokubonakala ngathi uyadika kwaye umbala ocacileyo, ayisiyiyo kwaphela. Umhlophe uzinikezela ukuba ubhangqwe ngawo nawuphi na umbala wokugqiba onokunceda ukuzisa ikhitshi ebomini.
Nokuba umkhwa omtsha mibala ye-neon okanye imiphezulu yeetafile ezenziwe ngomthi ziboleka isiseko esifanelekileyo. Ukutshintsha izixhobo zekhompyuter, i-backsplashes okanye i-countertops ngokuhamba kwexesha kunokunceda ukugcina iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe isiqwenga somfanekiso ekhitshini.
Iikhabhathi ezingwevu lukhetho lwesibini olungaphelelwa lixesha kwiikhabhathi zasekhitshini, njengesinye isiseko esingathathi hlangothi sokudlala ngaso. Kuyafana nokungwevu okumhlophe kunokubonakala buthuntu kwaye kuyadika, kodwa ingwevu inamacandelo amaninzi kwaye inokuchuma nangasiphi na isimbo nangaliphi na ixesha.
Sebenzisa ingwevu njengesiseko ngokuyisebenzisela iikhabhathi kunika ithuba lokongeza umbala kunye noyilo kuyo yonke indawo.
Ngokuchasene nomhlophe okhankanyiweyo ngaphambili kwempunga wongeza ubunzulu obungapheliyo kwaye usekwe kumthunzi wegrey okhethiweyo unokufudumeza okanye upholise indawo ngotshintsho oluncinci emthunzini okanye kumbala. Oku kuvumela yonke imibala kunye nokugqitywa kokusetyenziswa kunye nokubandakanywa kuyilo kunye iikhabhathi zasekhitshini ezingwevu .
Okwesithathu, kwaye uninzi lwendalo lweekhabhathi ezingapheliyo ezichazwe apha, iinkuni ezimnyama ziphikisana nokuba aziphelelwa lixesha okanye akunjalo. Eyona nto inkulu ngomthi ngokubanzi kukuba ayinakuze ihambe-inkcazo yokuphelelwa lixesha, ukumelana ngokupheleleyo novavanyo lwexesha.
I-rsvp ime ngesiNgesi
Eminye imithi kunzima ukuyidibanisa nezimbo ezithile njengoko ziqukethe iiorenji okanye ubumthubi obuninzi okanye umbala omdaka. Xa kuziwa kwimithi emnyama, bahlala betyebile ngombala kangangokuba banokubhangqa kunye nemibala eqaqambileyo eyahlukileyo kunye nemibala etyebileyo ehambelanayo.
Ngelixa ezi ntlobo zezitayile zahluke kakhulu, kuyabonakala ukubonisa iintlobo ezo Iikhabhathi zasekhitshini ezinkuni ezimnyama inokubonelela kwaye ingaqhubeka njani notshintsho kumaxesha.
Umbala wekhabhinethi olandelayo ongapheliyo uluhlaza okwesibhakabhaka. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngumbala ocacileyo otyebileyo oqhelekileyo. Umbala uyasebenza kwaye uhlala unxiba ngokwasemzimbeni ixesha elingaphezulu.
Ukongeza umbala ubuye wathandwa amaxesha ngamaxesha kunye nabaqulunqi ukutyhubela iminyaka, kunye nezibini kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo ezivelayo kuyo yonke le minyaka.
Kuyilo olunxulumene ngakumbi ndwendwela iphepha lethu Amakhitshi aluhlaza namhlophe .
Ngemibala emininzi eluhlaza, kukho enye ekufuneka ihlale ihamba ukuba awunqweneli ukugcina ukupeyinta iikhabhathi unyaka nonyaka. Mint eluhlaza ngumbala olandelayo ongapheliyo kuluhlu.
Umahluko weKrisimesi kunye nemifuno yehlathi enokuthi ingene kwaye iphume ngaphandle kwesitayile, ukhetho oluhlaza lwe-mint lubonelela ngokukhanya njengoko kulula ukudibanisa nemibala yalo naliphi na ixesha lonyaka, isimbo kunye nendlela esetyenziswayo.
i-avareji yobudala bomtshato wokuqala
Sebenzisa umbala njengesiseko seekhabhathi kubonelela ngokusetyenziswa kweminye imibala engathathi cala enokwenza ukuba yonke indawo iphelelwe lixesha xa ithelekiswa nemibala etshintshiweyo ngokutshintsha kwezinto. Bona Okuninzi iikhitshi eziluhlaza eziluhlaza Apha.
Kukhetho lokugqibela lwekhabhinethi olungapheliyo, zombini iiglasi ezinqabileyo kunye neziqhelekileyo akufuneki zikhutshelwe ngaphandle. Iglasi inika ithuba lokubhangqa nayo nayiphi na imibala kwaye ibonwa njengowona mgangatho uphezulu ubonakalayo, ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Ngeekhabhathi oku kunika ithuba lokuba imibala ye-aksenti ibandakanywe kwizitya ngaphakathi kwazo, kunye nombala ojikeleze ikhitshi. Iikhabhathi zeglasi zibonelela ngokuvuleleka kwindawo yonke.
Ikhitshi alipheli xesha apho linokuhlala khona, amashumi eminyaka kunye nezizukulwana zabantu kwaye akukho nto iba liliso kubantu abahlala kuloo ndawo.
Ukuthintela ukutshintsha kwezinto eziqhubekayo yinxalenye enkulu yokwenza naliphi na ixesha elingenasiphelo. Ngelixa kunokuhenda ukutsiba kwifashoni ye-shiplap okanye kumbala omtsha oqaqambileyo wonyaka, ezi azithandi ukuguga kunye nokungathathi cala.
Kuhlala kukho amathuba okongeza izinto ezinesitayile ekhitshini elingenasiphelo, kodwa oko kwenziwa ngcono ngezinto ezinokutshintsheka ngokulula, ezinje ngeeakhawunti okanye izinto zokubuyela umva.
Ukukhetha imibala engapheliyo kunye nezinto zokubala, iikhabhathi kunye nomgangatho yeyona ndlela ilungileyo yokwenza indawo engapheliyo. Ngomnye umbala odumileyo ongapheliyo ndwendwela igalari yethu iikhitshi zekhabethe yekrimu .
utata wesipho somtshakazi
Yeyiphi imibala yakho yekhabinethi oyithandayo engapheliyo? Sazise kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
Ingoma yothando elungileyo yexesha lonke
ithini i-rsvp kwizimemo